Liverpool oo jidkii ugu dambeeyay u mareysa soo xero gelinta Saul Niguez… (Muxuu yahay qorshaha xiga?) – Gool FM
(Liverpool) 28 Luulyo 2021. Kaddib markii uu si aanan la shaacin u burburay wada-hadalladii u dhexeeyay Barcelona iyo Atletico Madrid kaasoo ay isku weydaarsan lahaayeen Antoine Griezmann iyo Saul Niguez, naadiga Liverpool ayaa dadaalkeeda oo idil isugu geyneysa saxiixiisa xiddiga khadka dhexe kaga ciyaara kooxda caasimadda Spain ee Madrid ka dhisan.
Wararka ka imaanaya dalka Spain ayaa sheegaya inay Reds haatan kaga horreyso kooxaha Manchester United iyo Chelsea lasoo saxiixashada Saul, waxayna markaan diyaar u tahay inay aqbasho qiimaha ay Atletico dalbaneyso.
Kooxda uu hoggaamiyo Macallin Jurgen Klopp ayaa diyaar u ah inay miiska saarto qiimaha ay kooxda reer Spain ku dooneyso 26-sano jirka khadka dhexe ka ciyaara ee ah 41 milyan oo gini sida ay warineyso Diaro AS.
Reds ayaa suuqa kala iibsiga ka baadi goobeysa xiddig ka ciyaara khadka dhexe kaasoo baddel u noqda Gini Wijnaldum oo bilaash ugu biiray Paris Saint-Germain xagaagan, waxaana bartilmaameed koowaad u ah Saul Niguez.
Man United oo dhageysaneysa dalabaadka u imaanaya sagaal ka mid ah xiddigaheeda safka koowaad & Xilliga ay go'aan ka gaareyso mustaqbalka Pogba oo la shaaciyay